musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Mhepo Lines inotenga makumi matatu ndege dzeAirbus A30neo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kuwedzera ndege yeAirbus A321neo inosimbisa kuzvipira kweDelta Air Lines kutsiva zvikepe zvekare nemajeti akasimba, anoshanda.
Delta Mhepo Lines inoraira makumi matatu ekuwedzera Airbus A30neo jets.
Iyi nyowani inounza maAirbus akatanhamara mirairo kubva kuDelta kusvika pahuwandu hwe155 A321neos.
Delta iri kuratidza hutungamiriri hwakavimbika uye kurasa vhoti yakasimba yekuvimba izvozvi muA321neo.
Delta Mhepo Lines yaraira kuti dzimwe ndege makumi matatu dzeAirbus A30neo dzibatsire kuzadzisa zvinodiwa nenhandare yemberi yendege. Ndege dzichangobva kurairwa dziri kuwedzera kune iyo yendege maodha aripo e321 erudzi, achiunza iwo akatanhamara mirairo kubva kuDelta kune yakazara 125 A155neos.
"Kuwedzera idzi ndege kunosimbisa kuzvipira kwaDelta kutsiva zvikepe zvekare neyakagadzikana, jeti dzinoshanda, uye kupa ruzivo rwevatengi mune indasitiri," akadaro Mahendra Nair, Delta Air'Senior Mutevedzeri Wemutungamiriri - Fleet uye TechOps Supply Chain. "Delta inokoshesa kudyidzana kukuru pamwe nechikwata cheAirbus mukutsigira zvirongwa zvedu zvekukura, uye tinotarisira kuramba tichishanda pamwe chete mukugadzirisa nekupfuura."
"Sezvo indasitiri iri kutarisa kubuda mudenda, Delta iri kuratidza hutungamiriri hwakavimbika uye iri kupa vhoti yakasimba yekuvimba iye zvino muA321neo," akadaro Christian Scherer, Chief Commerce Officer uye Musoro weAirbus International. "Nemirairo makumi matatu yendege iri kudiwa zvakanyanya pasirese, vatinoshanda navo kuDelta vari kusimbisa danho ravanoona reA30neo nekushamisa kwayo kwezvakatipoteredza kune inozivikanwa nendege basa revatengi uye kuvimbika kwemakore mukati ramangwana. ”
Delta's A321neos ichave inofambiswa neinotevera-chizvarwa Pratt & Whitney PW1100G turbofan injini dzinounza zvakakosha hunyanzvi kuwana pamusoro pazvino Delta, yatove-inoshanda A321 ndege. Yakagadzirirwa zvigaro zvevatengi makumi mana nevapfumbamwe makumi maviri nevane makumi maviri muChikoro Chekutanga, 194 muDelta Comfort + uye 20 mu Main Cabin, Delta's A42neos ichaendeswa kunyanya kunhandare yendege yakazara yepamhepo network, ichizadzisa Delta yazvino A132 ngarava dzinopfuura zana ne321 ndege. Ndege yakarongerwa kuti igamuchire yekutanga yayo 321 A120neo ndege kutanga kwegore rinouya.
Mazhinji eDelta's A321neos anozonunurwa kubva kuAirbus US Kugadzira Nzvimbo muMobile, Alabama. Iyo ndege yatora kuburitsa 87 ndege dzakagadzirwa neUSB kubva ku2016.
Kubva pakupera kwaChikunguru, ndege dzeDelta dzendege dzeAirbus dzaive makumi matatu nemakumi matatu neshanu, kusanganisira ndege makumi mashanu A358, nhengo dzemhuri mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemakumi mana nemaviri, mazana mana nemakumi matatu nematanhatu emabhodhi, uye ndege gumi nemashanu A50 XWB.